Network cable ညှပ်နည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Network cable ညှပ်နည်း
14-06-2009, 10:29 AM
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 81 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Network ကြိုးညှပ်တဲ့ ပုံသေနည်းလေး ပါ….
UTP cable မှာကြိုးအစုံလေးတွေပါ ပါတယ်…. အဲ့ဒီ ကြိုးအစုံလေးတွေကို အစုံမှန်းသိအောင် အရောင်တွေနဲ့ ခွဲခြားပြထားပါတယ်….
white green, green, white orange, orange, white blue, blue, white brown, brown ဆိုပြီးတော့ ၈ ကြိုးရှိပါတယ်….
ကြိုးအရောင်တွေသိပြီ ဆိုရင်တော့ ပုံသေနည်းလေး ပြောပြပါမယ်….
Type A - WG, G, WO, B, WB, O, WBr, Br
Type B - WO, O, WG, B, WB, G, WBr, Br
switch ကနေ PC ကိုဆိုရင် Type A to Type Aနဲ့ ချိတ်ပေးရပါတယ်…. အဲ့ဒီနည်းကို straigth cable လို့ခေါ်ပါတယ်….နောက်တစ်မျိုး ကတော့ cross over cable ပါ…. သူကတော့ PC to PC ဒါမှမဟုတ်switch to switch ဆိုရင် Type A to Type B နဲ့ချိတ်ပေးရပါတယ်…. switch ကနေserver ကိုဆိုရင်လည်း ဒီ cross over cable နဲ့ပဲ ချိတ်ပေးရပါတယ်……
switch နဲ့ any end system နဲ့ချိတ်ရင် straight cable နဲ့ ချိတ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် switch နဲ့ server ချိတ်ရင် straight နဲ့ချိတ်ရပါတယ်
cross over cable က device to device (switch မဟုတ်တဲ့) ချိတ်ရင်သုံးပါတယ်
eg: router to router, pc to pc, firewall to pc, ----
အဲကြိုက်တဲ့ device နဲ့ switch နဲ့ချိတ် straight cable နဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ်။
ယွန်းကဗျာ ( ခ) Rabbit^_^
အောက်ပါအသင်းဝင် 34 ဦးတို့မှ ယွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဂျင်မ်, ဆန်းမောင်, ဆွိ, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မိုးလွင်, ရန်ရန်လင်း, သက်ပိုင်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ကြည်သာ, aungkohtat, bonge, Dramatic Sight, kkawave, Ko-Naing, kyansitthar, LaMike, lawliet, linthuraaung, Lwin Thu, maJunior, moemama2008, nwmgmg, nyowin, phyomyintthein, sanmin, sky4ster, themoon49
Find More Posts by ယွန်း
16-06-2009, 10:42 AM
ပြန်စာ - Network cable ညှပ်နည်း
ကိုယွန်းရေ Type A to B ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြစေလိုပါတယ်...... တစ်ဖက်ခေါင်းက A ဆိုရင် နောက်တစ်ဖက် B မျိုးကို ဆိုလိုတာလား.. ဒါမှမဟုတ် Mordem မှ Switch ကို B Type၊ Switch မှ PC ကို A Type ကိုပြောတာလား ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေး ပါလား......... မော်ကျိုးလေး...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မော်ကျိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungkohtat, kyansitthar, linthuraaung, sky4ster
16-06-2009, 12:04 PM
ယွန်းရေ အပေါ်မှာ switch to server ကို cross over နဲ. ဆိုပြီးတော့
အောက်မှာ straight ချိတ်ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာအမှန်လဲ ရှင်းပေးပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ digi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungkohtat, kyansitthar, linthuraaung
ပို့စ် 68 ခုအတွက် 307 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ supercool အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, စိုးမင်းသူမောင်, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, မိုးလွင်, ရဲထွတ်, လုလု, သက်ပိုင်ဦး, ဟိန်းသက်အောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, ကြည်သာ, aungkohtat, Ko-Naing, kyansitthar, lawliet, linthuraaung, Lwin Thu, phyomyintthein, sky4ster, Ye Aung
17-06-2009, 11:06 AM
တစ်ဖက်က အေဆိုနောက်တစ်ဖက်လည်း အေဖြစ်၇မယ်တစ်ဖက်က ဘီဆိုတောက်တစ်ဖက်လည်း ဘီဖြစ်၇မယ်..
ချိတ်တာ..အများစုက အေ ပဲသုံးကြတယ်ဘာနဲ့ချိတ်ချိတ်..ရတယ်..ပြသနာမရှိဘူး..စာထဲမှာတော့..
အဓိက က..တစ်ဖက်ခေါင်းက အေ ဆို..နောက်တစ်ဖက်လည်း အေ။အဲ့နပ်ဝပ်မှာလာချိတ်မဲ့..ကြိုးတွေအကုန် အေဖြစ်၇မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ယွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဟိန်းသက်အောင်, သေးသေးလေး, aungkohtat, bonge, ko sai, kyansitthar, linthuraaung, Lwin Thu, phyomyintthein, yawnathan, zimshine
ပို့စ်9ခုအတွက် 20 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
သူငယ်ချင်း digi ရေ switch to server ကိုstraightဲကြိုးနဲ့ချိတ်ရပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ matkhayar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဟိန်းသက်အောင်, aungkohtat, kyansitthar, linthuraaung, Lwin Thu
Find More Posts by matkhayar
20-07-2009, 01:41 PM
တည်နေရာ: 8 miles mayangone
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 91 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်သုံးတဲ့ကြိုးက cat5ကြိုးဗျ။အဲ့ဒီကြိုး မှာ ၈ ကြိုးပါတယ်ဗျ။အဲဒါကို အစဉ်အလိုက်စဉ်လိုက်မယ်။အရောင်အလိုက်ပေါ့ဗျာ။
၁။ဖြူမော် -------- ၁။ဖြူမော်
၂။မော် -------- ၂။မော်
၃။ဖြူစိမ်း -------- ၃။ဖြူစိမ်း
၄။ပြာ --------- ၄။ပြာ
၅။ဖြူပြာ -------- ၅။ဖြူပြာ
၆။စိမ်း --------- ၆။စိမ်း
၇။ဖြူညို ------- ၇။ဖြူညို
၈။ညို -------- ၈။ညို
ဒီအတိုင်းနှစ်ဖက်လုံးကို အဲလိုလုပ်ရင်တော့ straight ပေါ့ဗျာ။ဒီ straight ကြိုးကို switch ကနေ computer end device ပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးပါတယ်။croos ကြိုးလုပ်ကြည့်ရအောင်။
၁။ဖြူမော် -------- ၃။ဖြူစိမ်း
၂။မော် -------- ၆။စိမ်း
၃။ဖြူစိမ်း -------- ၁။ဖြူမော်
၆။စိမ်း --------- ၂။မော်
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ cross ပေါ့။ဒီကြိုးကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး peer to peer မှာသုံးပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးcross ကြိုးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကို E1 ကြိုးလို့လဲခေါ်ပါတယ်
၁။ဖြူမော် -------- ၄။ပြာ
၂။မော် -------- ၅။ဖြူပြာ
၄။ပြာ --------- ၁။ဖြူမော်
၅။ဖြူပြာ -------- ၂။မော်
ဒီကြိုးကတော့ ethernet ကနေ E1 ပြောင်းတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ဥပမာ FOM ကနေ RIC ပေါ့ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ naung252 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ကိုရင်ပြည့်စုံ, ဇင်ယော်, နီထွန်းဦး, မိုးလွင်, လုလု, သက်ပိုင်ဦး, ဟိန်းသက်အောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, ကြည်သာ, aung174, aungkohtat, aungzaw, bonge, Computer, ko myo, kyansitthar, lawliet, Lwin Thu, phyomyintthein, PyaitSone, sky4ster, themoon49, whiteman, yawnathan
Find More Posts by naung252
သတင်းလေးထပ်ဖြည့်ရရင် အခုနောက်ပိုင်းလာသမျှ switch, router အကုန်လုံးနီးပါးက intelligence ဖြစ်တော့ cross တွေ straight တွေကို မခွဲပဲ အကုန်သုံးလုို့ရလာပါတယ် ဟိုးအရင်ကဟာတွေကတော့ cross သုံးရမဲ့နေရာတွေဆို cross သုံးမှ straight သုံးရမဲ့နေရဆို straight မှလေ ..အခုတော့ ပိုအဆင်ပြေ လွယ်ကူလာပါပြီ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, မိုးလွင်, လင်းကျော်နိုင်, aungkohtat, kyansitthar, lawliet, Lwin Thu
29-08-2009, 04:05 PM
ပို့စ် 45 ခုအတွက် 124 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး- NIC ကဒ် ၁ ခုပါတယ်.... NIC Driver တင်ပြီးရင် Cable unplug ပြနေမယ်... Cable unplug မပြအောင် RJ-45 ခေါင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ ကြိုးညှပ်လို့ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်... တစ်ဖက်တည်းပေါ့... အခြားတဖက်မှာ ကြိုးစအတိုင်းပဲရှိတယ်.. ဘယ်လို ညှပ်ရလဲဆိုတာ သိတဲ့သူများ ပြောပေးကြပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ညိုမင်းလူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ညိုမင်းလူ
NIC card တစ်ခုစိုက်ထားပါတယ်
ဒါပေမယ် သူ့ရဲ့ကေဘယ် ခေါင်းက
RJ 11 ခေါင်းပါ။
Originally Posted by ဟိန်းသက်အောင်
Nic card ကို RJ 11 ခေါင်းနဲ့ မတွေ့ဖူးဘူးဗျ ကျွန်တော်အထင်တော့ Modem Card များလား ခင်ဗျာ
blackghost ရေ ကျွန်တော် motherboard မှာက RJ 45 အတွက်ပါပါတယ်။ Lan setting အတွက်ကို အဲ့ဒီအပိုင်းကပဲလုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် VGA card နားမှာ RJ 11 အပေါက်နဲ့ card တစ်ခုဆိုက်ထားတယ်။ ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဗျ။ သူ့အတွက် driver လဲမ၇ှိဘူး။ ကျွန်တော် photo နဲ့ ပြန်ပြောပြပါမယ်။
(၁)Straight-Through ကြိုး သူကို အသုံးပြုတာကတော့ Computer နှင့် Switch (သို့)Hub တိုချိန်ဆတ်ရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်သားထားတာလေးတွေကအလွယ်လေးတွေပါ။
Straight-through ကြိုးဆိုရင် အမျိုးအစားမတူတာချိတ်တယ်လိုမှတ်ထားတယ်။
(၂)Cross-over ကြိုးက Computer to Computer (သို့)Switch to Switch (သို့)Hub to hub
ဒီမှာကတော့ Straight-through ကြိုးတစ်ချောင်းညှပ်ကြည်ရအောင်
သုံးမယ်ကြိုးအမျိုးအစားက Category5(Cat 5)
RJ 45 ရဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ကမြင်ရပုံ
စပြီး ကြိုးကို 3cm လောက်ဓါးလေးနဲ့ပတ်ပတ်လည်လှီးပီအလည်ကကြိုးစလေးတွေကိုထုတ်လိုတ်တယ်။
ပြီးတော RJ ခေါင်းကိုပတ်လတ် အနေအထားနဲ့စီထားတဲကြိုး၈ချောင်းကိုထိုးထည်လိုတ်တယ်။
ပလယ်ယာကလည်း ကြေးပြားလေးတွေနဲ့နောက်က ကလစ်လေးကို ဖိညစ်လိုတ်တာပဲ။
ကြိုးတစ်ချောင်း ရဲအစ နှစ်ဖတ်စလုံးကိုအဲအတိုင်းညှပ်လိုတ်ရင် Straight-Through cable တစ်ချောင်းရပီပေါ့။
UTP (T568 B)
PHOTO BY http://www.sterpin.net/
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်ပိုင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, သေးသေးလေး, အေးမင်းမောင်, aungkohtat, azp09, bonge, g00gle, juwathan, Ko-Naing, lawliet, Lwin Thu, nyi.nyi, PyaitSone, sky4ster, tu tu, whiteman
ပို့စ် 90 ခုအတွက် 830 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒါကတော့ကိုသံလုံငယ် မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ရောက်ခြင်းရေးခဲ့တဲ့ Network Cable
ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ပို့ဒ်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ PDF ပြန်လုပ်ပြီးသိမ်းထားတာလေး
ပါ..။Network Cable ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အ
[SIZE=4][COLOR=Magenta]လူတိုင်းတွင်ပညာနှစ်ခုရှိသည် ။တစ်ခုကသူတစ်ပါးထံမှရသောပညာဖြစ်ပြီး ပိုအရေးပါသောနောက်တစ်ခုကားကိုယ်တိုင်ရှာသောပညာရေးဖြစ်သည်
( ဂစ်ဘွန် )
Last edited by bonge; 19-07-2011 at 03:53 PM.. Reason: လင့်ပြင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ အေးမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ထွန်းလေး, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သက်ပိုင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, aungkohtat, azp09, bonge, g00gle, lawliet, Lwin Thu, myonwe, nyi.nyi, putty, PyaitSone, sky4ster, Storm
Find More Posts by အေးမင်းမောင်
rj 11 ကဖုန်းအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်.
Last edited by maJunior; 05-01-2012 at 11:32 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, g00gle, Lwin Thu
တည်နေရာ: မြ၀တီမြို့၊ ကရင&
အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ကိုလဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖော်ပြပေးနိုင်ပါစေ။
Find More Posts by မင်းဦးကို
Cat6ညှပ်နည်းလေးသိချင်လို့ပါ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွှန်တော်ကို ပုံလေးနဲံတကွ ၇ှင်းပြပေးပါလား။ ခင်မင်စွာဖြင့်..
28-12-2015, 01:54 PM
မူရင်း ကိုသံလုံးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှ မျှဝေမှာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ itmyanmar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကို itmyanmar ရေ
အကိုသံလုံငယ်ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် https://www.facebook.com/thanlonngeblog/
သူ့ဖေ့ဘွတ်ကနေ ဆက်သွယ်လို့ရမယ် ထင်တယ်အကို..
14-12-2016, 05:08 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2016
ကွန်ပျူတာထဲမှာ Lan setting ဘယ်လိုချိန်ရလဲ ပြောပြပေးပါလား
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Dramatic Sight အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Dramatic Sight ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Dramatic Sight
19-12-2016, 08:10 AM
windows7မှာဆိုရင်တော့
Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Internet Options -> Connections -> LAN Settings
windows 8 and 10 မှာတော့
start -> settings -> network and internet -> ethernet
networking guide, networking howto, networking knowledge
Network device ဆိုင်ရာ သတိပေးနှိုးဆော်ချက် komyo2010 Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 1 02-06-2010 09:19 PM
How Network Admin Trace Each Pc unlimited Network ပိုင်းဆိုင်ရာ030-10-2008 08:03 PM
C++ Network Programming, Volume I kothu E-books များ011-02-2008 07:06 AM